GCA Event Marketing Strategy & Technology Seminar
Thu, 28 Apr, 2016, 9:00 AM - 11:30 AM (GMT+6.5)
International Business Centre IBC Centre, Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)
Global Connect Asia Company Ltd., will be organising the very first seminar in Myanmar "GCA Event Marketing Strategy & Technology Seminar" on Apr 28th, 2016. In this seminar, event management experts will present and discuss the techniques on how event organisers, event owners and event associates could make use of the latest cloud-based technologies to drive quality attendance to the events, to prepare the best strategies for pre-event, on event, and post-event activities, to achieve the great success in organizing from small to big scales events, seminars, conferences, music festivals etc.
Strategy to Run Successful Events asaPowerful Marketing Channel
Leveraging on Technology to Enhance Onsite Experiences of Attendees at Events
An Enterprise Journey
Global Connect Asia Company Ltd., မှ ကြီးမှူး၍၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈)ရက် (ကြာသပတေး)နေ့တွင် GCA Event Marketing Strategy & Technology Seminar ကိုကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲ တွင် အခမ်းအနားစီစဉ်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှ မိမိတို့ ကျင်းပလိုသော အခမ်းအနားများ၊ ဟောပြောပွဲများ၊ ညီလာခံများ၊ နည်းပညာပြပွဲများ၊ ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ များ ကို အောင်မြင်စွာဖြစ်မြောက်နိုင်စေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ အလိုက် လိုအပ်သည့်အသေးစိတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ ဈေးကွက်မြှင့်တင်မှု ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းများကို ဆွေးနွေးဟောပြောမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့အထက်ဖေါ်ပြပါအခမ်းအနားစီစဉ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ အပြင် အခြားနယ်ပယ်အသီးသီးများမှလည်း စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့် တက်ရောက်လိုပါက ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန် လေးစားစွာ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ (လူဦးရေ ကန့် သတ်ထားပါသည်။)
အချိန် - ၉း၀၀ - ၁၁း၃၀
နေရာ - IBC ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့ 
ထိရောက်သော Marketing channel တစ်ခုကိုအသုံးပြု၍ အောင်မြင်သော Eventများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နည်းလမ်းကောင်းများ
ပွဲတက်ရောက်လာသည့်ဧည့်သည်တော်များ စာရင်းသွင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့ လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲအစည်းကြီးများ နှင့် ကုမ္ပဏီကြီး များမှ နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိသော များစွာသော Event များကို စီမံခန့် ခွဲခြင်း ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
Organizer: Thu Yain Htut Contact the organizer